Ukwedlula emhlabeni kweJaji kuzamazamisa umhlaba | Scrolla Izindaba
Ukwedlula emhlabeni kweJaji kuzamazamisa umhlaba
Ukwedlula emhlabeni komunye oyijaji eliphezulu eMelika kuqala impi enkulu phakathi kukaDonald Trump nezimbangi zakhe njengoba kuyiwa okhethweni mhla zintathu kuLwezi.
Impi yokuvala isikhala sejaji, uRuth Bader Ginsburg, ingahle yenze umonakalo omkhulu emhlabeni wonke.
Njengoba iMelika isenamandla kangaka nje, ukhetho lwangoLwezi beluvele lukhetheke njengokhetho okubaluleke kakhulu ukwedlula eminyakeni eyedlule.
Uma uDonald Trump engawina futhi, ingahle ibe nemiphumela emibi kakhulu emhlabeni wonke.
Njengamanje amaphaphu aphakeme.
Inkantolo ephezulu yaseMelika, -inkantolo ephakeme ikhethe amajaji, acacisayo ukuthi ami kuphi kwezopolitiki. Lokhu kusho inkantolo ayizimele, njengaseNingizimu Afrika kanye nakwamanye amazwe anomthethosisekelo wentando yeningi.
UGinsburg ubengumholi oyijaji elizimele lenkantolo uTrump azame ukuyiqumba phansi nalabo abalondolozayo nabasohlangothini lwakhe.
Ngokwethembeka kwenkantolo ephakeme ekhethiwe, okunye okuphumelele kanye neminye iminyaka emine kaTrump ingaletha izinxushunxushu ezinkulu.
UTrump ukhombisile ukuthi ukungabinaqiniso nokukhaphela abantu eqinisweni esebenzisa ezocwepheshe ze-21st century kungaba yimpumelelo.
Omunye umbuso kaTrump ungakhanda kabusha ukuthi abantu kuwo wonke amazwekazi bengabhekana kanjani neqiniso.
Kanti nenkantolo ingaqala kabusha imigomo engabhekana nokuthi umhlaba ungabhekana kanjani nokuguquka kwesimo sezulu, ukungalingani kanye nokulahleka kwemisebenzi.
Manje uTrump uzama ukuvala lesi sikhala ngaphambi kokhetho, ukuze noma ngabe kuthiwa uyahlulwa okhethweni inkantolo izophoqeleka ukhiqiza lokhu okubekiwe.
Imbangi yakhe yentando yeningi uJoe Biden kanye nowayenguMongameli uBarack Obama, batshele uTrump kanye neqembu lakhe ukuthi bayeke isikhala sinjalo singavalwe muntu kuze kwedlule ukhetho.
Egulele ukufa uGinsburg,omele ukulingana kwabantu impilo yakhe yonke, wenze isicelo sokuthi ozohlala esitulweni sakhe angakhethwa kuze kwedlule ukhetho.